Ukwehluleka Kwezentengiso: Lapho i-Tech Yenza Okubi Kakhulu Kunokulunga | Martech Zone
Ukwehluleka Kwezentengiso: Lapho i-Tech Yenza Okubi Kakhulu Kunokulunga
Lapho sisebenza namakhasimende, sivame ukuwazisa ukuthi sisese entshonalanga yasendle yokumaketha online ... lezi kuseyizinsuku ezisencane futhi akuyona yonke into eseyizamile okwamanje. Kepha lokho akusho ukuthi asisakwazi ukufunda emaphutheni abanye.
Ngobuchwepheshe obusha obuqhamuka cishe nsuku zonke, kudinga uchwepheshe wokumaketha onolwazi nofundile ukuthi angalisebenzisa kanjani ikhono lobuchwepheshe obusha bokumaketha futhi abenze impumelelo yokuthengisa. Lapha, siphawula ukuthi ukumaketha okuphezulu kwehluleka, kugqamisa okungahambanga kahle nokuthi ungakugwema kanjani ukwenza iphutha elifanayo. Izinjini ze-Lattice
Lesi yisigaxa samaphutha ajwayelekile izinkampani ezenzayo. Ngizokuvuma ngokuphelele ukuthi ngivame ukuba namaphutha wokuqukethwe. Futhi ngingeze ukuthi kusamele ngibone ukusetshenziswa okuhle kwamaKhodi we-QR ngaphandle kweGoogle Glass (elingenalo igama elingukhiye). Kungumqondo wami ukuthi bayisehluleki nxazonke ngoba abafaki ukufaka uphawu futhi abakhohlakali njengokuthile okufana nendlela ye-URL.
Thola imininingwane ethe xaxa yokuthengisa nokumaketha kusuka ku- I-Lattice Knowledge Hub.
Tags: ezishintshayoUkukhangisa Okuqukethwei-imeyili yehlulekauhlulekaukwehlulekahashtagi-hashtag yehlulekileezentengiselwano ezishintshayo ziyahlulekaukumaketha kwehlulekaukwehluleka ukumakethaAmavidiyo WokumakethaIkhodi ye-QRikhodi ye-qr yehlulekaukukhomba kwehlulekileividiyo yehluleka
Umhlahlandlela weholide wokumaketha kweselula